INkantolo Enkulu yaseThekwini ichithe inkampani yomshwalense - Bayede News
INkantolo Enkulu yaseThekwini ichithe inkampani yomshwalense
Abakenzi lutho: Basengula ngomlando nezwekazi i-Afrika
Umshwalense yinto ebalulekile kumuntu kepha abaningi sebethanda ukuba manqika ukuyijoyina ngenxa yezingqinamba eziba khona uma sekufanele umnikazi wepholisi akhokhelwe inkampani yomshwalewense isibika imbiba ibika ibuzi. Abami kahle ngasezimalini bayakwazi ukuziphonsela inselelo izinkampani zomshwalense uma sekukuleli zinga kwezinye izikhathi bagcine bephumelela.
Kulokhu sibheka udaba lukaMnu uRavichandren Reggie Dhurgasamy obebhekene ngeziqu zamehlo nenkampani yomshwalense iDiscovery Life Limited bebanga imali eyizigidi ezi-R2 okwakufanele imkhokhele yona ngenxa yokuthi wakhubazeka wangabe esakwazi ukusebenza
Isicelo sale nkampani sokuba kuchithwe ukuqinisekiswa kokuthi uDhurgasamy akasakwazi ukusebenza sichithiwe yiNkantolo Enkulu yaseThekwini.
UMehluleli uMehendra Chetty ukhiphe isinqumo esivuna uDhurgasamy wayalela le nkampani yomshwalense ukuba ikhokhe izindleko zecala.
Ngowezi-2009 uDhurgasamy waba nenkinga kwesingezansi somgogodla, wahlinzwa kodwa wagcina engasakwazi ukwenza lutho okwaholela ekutheni angabe esasebenza.
Ngowezi-2011 wabe esefaka isicelo sokukhokhelwa.
Ngenxa yokuthi wayenomhlomulo weCapital Disability neDiscovery wayelindele ukuba akhokhelwe isamba semali esingaphezulu kwezigidi ezi-R2 ngalesi simo ayesekusona.
Ngesikhathi eveza ukuthi wake wahlinzwa eqolo ngowezi-2001, le nkampani yathi wehlulekile ukuveza ukuthi wake wabonana nodokotela ngowezi-2006 nangowezi-2007 owathi unesifo somgogodla ispondylosis. Ngalokho-ke le nkampani yabe isinqaba ukwamukela isicelo sakhe sokukhokhelwa.
Ngowezi-2012 uDhurgasamy udaba walwedlulisela kumxazululi wezikhalo ezithinta umshwalense waphumelela kodwa le nkampani yathi ukukhubazeka kwakhe okwesikhashana yabe isimukhokhela i-R130 050.
Ayikho enye imali eyaphinde yakhokhwa ngoba ipholisi yakhe yavaleka ngowezi-2012. Yena uthi isizathu salokhu ukuthi wayengasenawo amandla okuyikhokhela ngaleso sikhathi.
Nakuba acela ukuthi kuphindwe kucutshungulwe isimo sakhe ngowezi-2012, iDiscovery yenqaba imi kwelokuthi uDhurgasamy akakhubazekile.
UDhurgasamy wabe esebuyela kumxazululi okwathi emveni kokucubungula ubufakazi obethulwe yizinhlangothi zombili, ngoMbasa wezi-2016 wathi akakwazi ukukhipha isinqumo esivuna lezi zinhlangothi.
Kuthe ngowezi-2017 uDhurgasamy wathumelela iDiscovery amasamanisi mayelana nokufuna kwakhe ukukhokhelwa okwalandelwa ukuqophisana ngezomthetho okufaka phakathi nombandela iDiscovery eyawufaka esicelweni sokukhokhelwa sikaDhurgasamy.
UDhurgasamy akakuvumelanga ukwehlulwa yile nkampani wayisola ngokuthi “yenza konke okusemandleni ukubalekela ukubhekana nomsebenzi wayo ngoba inenxa naye”.
Wabe eseqasha ithimba labameli elalihlanganisa u-Advocate uRyan Naidu nefemu yabameli iManoj Haripersad and Associates ukuba liphikise ngamandla izenzo zeDiscovery.
UDhurgasamy uthe, mhla zingama-20 kuMbasa uMehluleli akasitholanga isisekelo sesicelo esenziwe iDiscovery ukuthi isicelo sami sokukhokhelwa asibambeki.
Uphinde wathi okwashiwo iDiscovery ukuthi ukubambezeleka kwecala kwadalwa nguye ngokuqoka abameli abasha kwakungelona iqiniso.
Bathi likhona icala kosolwa ngokuthungela iPhalamende abeNPA
Uthe isinqumo sakamuva senkantolo siwumphumela obaluleke kakhulu.
“Angikwesabi ukubhekana nesikhondlakhondla senkampani yezezimali esifana neDiscovery.,” kusho yena. UMnu uHein Human oyinhloko yezindaba zezomthetho kwaDiscovery ukuqinisekisile ukuthi ngeke basiphonsele inselelo isinqumo senkantolo sakamuva, bazosihlonipha isinqumo kepha uyalamukela ithuba lokuba udaba lulalelwe enkantolo evulelekile. Nakuba kunjalo, uthe banobufakazi obungangabazisi ukuthi isicelo sikaDhurgasamy asikho. Uthe isicelo sikaDhurgasamy basichitha ngoba sasigahlangabezani nemigomo yokukhubazeka kwaphakade.
“Kuyishwa ukuthi uDhurgasamy ubefuna ukusebenzisa leli cala lakhe njengendlela yokubukela phansi imizamo yethu yokungabekezeleli ukukhwabanisa, ukunakekela amakilayenti ethu nendlela eqondile esisebenza ngayo njengabahlinzeki bezezimali,” kusho uHuman.
Uthe bayaziphikisa zonke izinsolo zokuthi iDiscovery ibizama ukudida uDhurgasamy nokubambezela ngamabomu icala.
Uchaze wathi imibandela yinto ejwayelekile emacaleni afana naleli nokuthi mhla zili-19 kuNdasa wezi-2020 iDiscovery yathola isaziso sokuhoxa kwabameli bakaDhurgasamy iManoj Haripersad and Associates.
“Yona le nkamapani yaphinde yaqokwa emveni kwalokho kungakapheli nasikhathi esingakanani, lokhu kwaholela ekubambezelekeni kwecala ngoba kwaphoqeka ukuthi icala lihlehliswe. IDiscovery ayinanhloso yokubambezela icala futhi ifuna ukulibona seliphothuliwe,” kubeka uHuman.
nguSabelo Mbatha Jun 4, 2021